Gobollada Sool iyo Sanaag oo Yeelanaya Ciidan Dab-demis, 50 Boos-Shaqo oo ka bannaan iyo Shuruudaha looga baahan yahay | Somaliland Post
Home News Gobollada Sool iyo Sanaag oo Yeelanaya Ciidan Dab-demis, 50 Boos-Shaqo oo ka...
Gobollada Sool iyo Sanaag oo Yeelanaya Ciidan Dab-demis, 50 Boos-Shaqo oo ka bannaan iyo Shuruudaha looga baahan yahay
Hargeysa (SLpost)- Gobollada Sool iyo Sanaag ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa markii u horeysay yeelanaya Ciidan Dab-demis ah oo ka hawl-gali doona Xarumo Cusub oo laga samaynayo magaalooyinka Laascanood iyo Ceerigaabo.
Xarunta Guud ee Ciidanka Dab-demiska ee magaalada Hargeysa, ayaa baahisay in labadaas gobol mid kasta ay ka hawl-gali doonaan 25 Xubnood oo tiradooda marka laysku daro noqonayso 50 xubnood oo loo tabobaro Ciidanka dab-demiska ee labada gobol.
Xubnaha loo qaadanayo ciidanka dab-demiska ee gobollada Sool iyo Sanaag ayaa boosaskooda lagu naadiyey ogeysiis bulshada gobolladaas lagu wargelinayo inay soo codsadaan boosaska iyagoo araajida codsiyadooda ku hagaajinaya Xarumaha Maamulka degmada Laascaanood iyo gobolka Sanaag.
Naadada lagu faafiyey boosaska shaqo ee ka bannaan Ciidanka dab-demiska ee loo qaadanayo gobollada Sool iyo Sanaag oo ay ku lammaan yihiin laba qodob oo gun-dhig u ah shuruudaha looga baahan yahay qofka ka qayb-galaya, ayaa u qornaa sidan:-
“Ciidanka Dab-demiska Somaliland wuxuu Naadinayaa xulashada xubnaha cusub ee loo tababari doono Ciidanka Dab-demiska Gobolada Sool iyo Sanaag, kuwaasi oo tiradoodu kala ah 25 Xubnood oo loo tababarayo Gobolka Sool iyo 25 Xubnood oo loo tababarayo Gobolka Sanaag.
Haddaba Ciddii dananaysa in ay ka mid noqoto xubnaha loo tababari doono Ciidanka Dab-demiska Goboladaas, waxay codsiyada iyo araajida ku soo hagaajin doonaan xarunta Dowlada hoose ee Laascaanood iyo xarunta Badhasaabka Gobolka Sanaag taasoo socon doonta Muddo 5 Maalmood laga bilaabo taariikhda 16/01/2020 ilaa 20/01/2020.
Shuruudaha Qaybta 1aad (Shakhsiyada Qofka )
Inuu yahay Muwaadin Somalilander ah, haysatana kaadhka Dhalashada Somaliland ( National ID Card)
In aanu xukun maxkamadeed ku dhicin 2 ilaa 3 dii Sanadood ee u dambeeyay.
Inaa aanuu lahayn balwad sida Jaadka, Sigaarka IWM
In Da’diisu aanay ka yarayn 18 Sanno kana weynaaan 25 Sanno.
In uu leeyahay aqoon ugu yaraan Dugsi sare ama wax u dhigma
In aanu dhererkiisu ka gaabanayn 1.75m, Miisaankiisuna ka yaraan 65 Kg.
In laga qaado Imtixaam orod, culays qaadis, Diin, Taariikh iyo Xisaab.
In aanuu shaqo kale haynin, Waxbarashana u socon.
Inuu la yimaado 2 Sawir oo kur ah iyo aqoonsiga shahaadada asalkeeda.
Shuruudaha Qaybta 2aad ( Caafimaadka Qofka )
Qof Jidh ahaan Caafimaad qaba Qof Maskax ahaan Caafimaad qaba.
Waa in qofka laga qaado baadhitaan caafimaad oo iskugu jira baadhitaanka cudurada kala duwan iyo baadhitaan maskaxeed.
In ay caddaato ka bad-qabka cudurada faafa sida ( TB, Hepatitis C,B iyo HIV).
In quwadda caafimaad ee jidhkiisa adkeysi u leedahay neefsiga xaaladaha culus.
In jidhkiisu bedqabo dhaawac muuqda iyo mid qarsoona laheyn.